प्रत्येक व्यक्ति सामान्य हो र ऊ केही असामान्य मनोवैज्ञानिक समस्याहरूसँग जुझिरहेको हुनसक्छ । नेपाल हिप्नोसिस क्लिनिक तथा तालिम केन्द्रले मनोउपचार साइकोथेरापी सेवाको प्रयोग गरी मानसिक स्वास्थ्यको सवलिकरण गर्नुका साथै स्वस्थ जीवनका लागि सहयोग गर्छ, जसका मद्दतले तपाईँले आफ्नो ब्यक्तिगत तथा ब्यावसायिक जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
शारीरिक अस्वस्थता जस्तै मानसिक समस्या पनि स्वाभाविक हो
नेपाल हिप्नोसिस क्लिनिकले मनोउपचार विधिहरूको प्रयोग गरी मनोसामाजिक समस्याहरू (जस्तै- दिक्दारी, छट्पटी, डर, चिन्ता, रिस, न्यून आत्मासम्मान, सम्बन्ध, ओसीडी आदि) को पहिचान गरेर निर्मुल गर्छ । हरेक व्यक्ति तथा समस्या भिन्न हुने हुनाले उपचार विधि पनि त्यसै अनुरूप भिन्न हुन्छ । त्यसैले सेवाग्राहीका समस्या हल गर्न हामी 'इक्लेक्टिक', अर्थात् धेरैवटा उपचार विधिको प्रयोग गरिने पद्दति अपनाउँछौँ । हामी सम्मोहन उपचार (हिप्नोथेरापी), गेस्टाल्ट उपचार, मनोविमर्श, स्पर्श उपचार, सीबीटी, एनएलपी जस्ता साइकोथेरापी विधिको प्रयोग गर्दछौँ ।
सारा समस्या तपाईँ एक्लैले झेल्नु पर्दैन । सहयोग खोज्नु एकदमै स्वाभाविक र सामान्य हो ।
जीवन रुपान्तरण गर्ने बहुप्रशिद्ध तालिम श्रृंखलाहरूमा सामेल हुनुहोस्
प्रयोगात्मक तथा ब्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनु नेपाल हिप्नोसिस तालिम केन्द्रको विशेषता हो । अधिकांश पाठ्यक्रमहरू कार्यशाला ढाँचामा आयोजना गरिन्छ जहाँ तपाईँले सैद्धान्तिक आधारहरू त सिक्नु नै हुनेछ र त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सिकेका कुराहरूलाई वास्तविक जीवनमा उपयोग गर्न सक्षम हुनेगरी प्रयोगात्मक तालिम पाउनुहुनेछ। नेपाल होप्नोसिस, 'ब्लेन्डेड प्रणाली' जस्तो सशक्त शिक्षण विधिको प्रयोग गर्ने देशकै अग्रणी तालिम प्रदायक संस्था हो। हाम्रा प्रशिक्षकहरू उच्च योग्यता तथा लामो अनुभवले निखारिनुभएको छ । हामीले प्रदान गर्ने तालिममा तपाईँले विषयगत सैद्धान्तिक पाठका साथै धेरै गुणा बढी उपयोगी प्रशिक्षकहरूका अनुभवको आलोकबाट लाभान्वित हुने दुर्लभ अवसर पाउनुहुनेछ ।
हामी ब्यावसायिक तथा आत्मसहयोगी - सेल्फ हेल्प तालिम प्रदान गर्दछौँ ।
के तपाईँ मनोउपचारको क्षेत्रमा आफ्नो करियर निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ? अथवा, के तपाईँ पहिल्यै मनोविज्ञानको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ र नयाँ दक्षता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ?
तपाईँका लागि हामीसँग निम्न कार्यक्रमहरू छन् ।
सम्मोहन उपचार (हिप्नोथेरापी) तालिम श्रृंखला
स्पर्श उपचार तालिम श्रृंखला
हस्तलेखन विश्लेषण (ग्राफोलोजी) तालिम श्रृंखला
गेस्टाल्ट मनोउपचार तालिम श्रृंखला
आत्मसहयोगी - सेल्फ हेल्प तालिम
के तपाईँ आफ्नो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्यको सुदृढिकरण गर्ने स्वहेरचाह विधि सिकेर ब्यक्तिगत तथा ब्यावसायिक जीवनमा उच्चता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ?
तपाईँका लागि हामीसँग निम्न तालिम कार्यक्रमहरू छन् ।
आत्मसम्मान तालिम श्रृंखला
आत्मसहयोगका लागि स्वसम्मोहन (सेल्फ हिप्नोसिस)
जोयमान्डु : आँफूलाई बुझ्नका लागि यात्रा
बाहिर रहेको अवस्थामा पनि सहयोग प्राप्त गर्नुहोस्। नेपाल हिप्नोसिसले अनलाइन थेरापीको सुविधा प्रदान गर्दछ।
ओस्लो, नर्वेमा रहेको डिजीब्रेरी नामक सञ्चार संस्थाले साइकोथेरापिस्ट, प्रशिक्षक तथा नेपाल हिप्नोसिसकी अध्यक्ष अर्चना विभोरसँग लिएको अन्तर्वार्ता।
हिप्नोथेरापिस्ट अर्चना विभोरले नेपाली भाषामा तयार पार्नुभएको यो छोटो सम्मोहन भिडियोले तपाईलाई मनको गहिराइमा लानेछ जहाँ तपाईँलाई एक सकारात्मक सुझाव दिइनेछ ।
परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सम्भव नहुन सक्छ। सौभाग्यवस् परिवर्तनहरूलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने चाहीँ हाम्रै हातमा हुन्छ। दृष्टिकोण परिवर्तन गरे जिन्दगी नै परिवर्तन हुन्छ।
आधुनिक सम्मोहन चिकित्साका पिता भनेर चिनिने मिल्टन एच एरिक्सनका केही दुर्लभ भिडियोहरू जसमा उहाँले हाम्रालागि केही जीवनोपयोगी शिक्षा दिनुभएको छ।